Sajhasabal.com |विवाह अगाडी नै जवानी सुम्पिदा.... यसरी मारिन्छन् युवतीहरु
गायक तथा बामपन्थी नेता भिमलाल भुसालको हृदयघातका कारण निधन
सबैको साझा संकल्प मुलुकको समृद्धि बन्नुपर्छः मन्त्री थापा
एमाले नेता कार्कीको अन्त्यष्टी
बुर्तिवाङदेखि काठमाडौँसम्मका लागि सिधा माइक्रो बस सेवा सञ्चालन
समाचारको खोजीमा दौडिरहने पत्रकार शनिबार भने ध्यानमा मस्त
बागलुङका तीन सडकलाई तीन करोड
बागलुङका विद्यालयले पुनःनिर्माणमा गति लिँदै
अनुदान पाउन छुटेका भूकम्प पीडितलाई लाभग्राहीमा समेटिने
विद्यालयको वार्षिकोत्सवको अवसरमा विद्यार्थीलाई खेलकूद पोशाक वितरण
पल्टारमा कृषि उपज संकलन केन्द्रको कार्यक्रम: कृषक उत्साहित
त्रिभुवन माविमा धानै रोपेर मनाइयो विश्व धान दिवस
बाग्लुङ्ग - BGL / समाज
विवाह अगाडी नै जवानी सुम्पिदा.... यसरी मारिन्छन् युवतीहरु
Posted on: 04 Feb, 2018
प्रेम सुनार | माघ २१, गुल्मी | बाग्लुङ्गकी २२ वर्षिया कमला शर्मा कक्षा १२ को अग्रेजी विषय लागेको परिक्षा दिने तयारीमा थिईन । अकर्षक ज्युडाल, शौन्दर्यकी खानी थिईन् । उनको त्यही शौन्दर्यमा आँखा प¥यो पर्वतका २३ वर्षिय विक्रम भनेर चिनिने प्रदिप पराजुलीको । अन्ततः आज भोली फर्सी धाउँदै र फेशवुकबाट सुन्दर भविश्यका सपना देखाउँदै माया प्रेमको जालमा फसाउन सफल भए पराजुली ।
नाम नवताउने सर्तमा उनका साथीहरुका अनुसार उनिहरु विच लामो समय देखि प्रेम सम्वन्ध चल्दै थियो । विवाहको प्रलोभनमा कमलाले प्रेम पराजुलीलाई जवानी पनि सुम्पिदै आएकी थिईन् । शर्माले गर्भधारण गरिन् । दिन प्रतिदिन पेटमा बढ्दै गएको शिशु के जन्मियला ? कस्तो जन्मिएला ? यस्तै यस्तै मिठा सपनाहरु देख्दै आई रहेकी शर्माले त्यो सपना र आफैमा मात्र सिमित खुशी प्रेमी पराजुली संग साट्न चाहिन् । त्यो खुशी साट्नको केहि छिन नवित्दै मुटुको टुक्रा ठानिएको प्रेमीले गला रेटेर मार्यो र कालिगण्डकी नदिमा फालि दियो ।
केहि दिन अघि गुल्मीको खड्गकोट पुछारमा कालिगण्डकी नदि किनारमा मृत फेला परेकी युवतीको घटना उठान गर्दै छौं हामी । त्यति वेला वेवरिसे रहेको उनको शव गुल्मी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याईयो । यहाँको प्रहरीले बाग्लुकी युवती भएको पत्तो लगायो र वाग्लुङ्ग जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खवर गर्यो । उक्त शव वाग्लुङ्गको जैमुनी गाउँपालिका वडा नम्वर ८ की कमला शर्माको भएको खुल्यो । उता मृतक कमलाका परिवारले वाग्लुङ्ग जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दियो । कमलाका दाजु रामप्रसाद शर्माका अनुसार माघ ५ गते विहान पौने नौ वजेको समयमा घरमा वुवा आमा संग मलाई सामान्य पेट दुख्यो औषधी खान जान्छु भनेर घरबाट हिडेकी थिईन् । ढावा भन्ने स्थानमा रहेको हरि ढकाल भन्ने व्यक्तिको औषधी पसलमा उनि पुगेकी थिईन् । त्यहाँबाट उनि हिडे पछि साँझ ६ वजे सम्म पर्वतको विहादी गाउँपालिका वडा नम्वर २ को विक्रम भनेर चिनिने २३ वषिय पदिप पराजुली संग कमला संगै बसेको देख्नेहरु भेटिए । त्यसको आधारमा वाग्लुङ्ग जिल्ला प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाएको हो ।
पर्वत जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी दिलिप घिमिरे संग सम्पर्क राख्दा निजले हत्या गरेर फालेको स्वीकार गरेको रआज अदालतमा म्याद थप गर्न लागिएको बताए । डिएसी घिमिरेको अनुसार निजले यस्तो वयान दिएका छन्– ‘उ संग मेरो प्रेम सम्वन्ध थियो । माघ ५ गते साँझ ६ वजे तिर पर्वत र गुल्मी जोड्ने वउर पुल पारीको खेतमा हाम्रो भेट भयो ।
उताबाट पार गरेर पारी खेतमा गएर बस्यौं । उनले मेरो पेटमा गर्भ रहेको छ भनेर भनिन् । मैले गर्भपतन गर भनेर पटक पटक सम्झाएँ । उनले मान्दै मानिन् । त्यस पछि हाम्रो बेस्सरी झगडा भयो ।, मेरो पालो म फँस्ने भएँ , विवाह गर्न पर्ने भयो भन्ने ठानेर उनको सल झिकेर गलामा कसेँ, उनको ज्यान लिई सके पछि लतार्दै त्यही पुलमा लगे तल खोलामा फालि दिएको हुँ । ’ यति वेला मृतक कमलाका माता पिता छोरीको किरियाक्रममा रहेका छन् । पुत्रीशोकमा परेको उनिहरु वोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । उनका दाजुले भने –वाग्लुङ्ग जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सुरुमा अभियुक्तले ढाट्ने भरपुर प्रयास गरेको थियो । मेडिकलवालाले पनि सुरुमा ढाट्ने प्रयास गरेको मृतकका दाजु रामप्रसाद बताउँ छन् । त्यस्ता अपराधीलाइ कुनै राजनैतिक दलका आवरणमा बचाउने ठुलो चलखेल हुन लागेको भए त्यसलाई सञ्चारकर्मीहरुले पनि निगरानी गर्न आग्रह गर्दुछु र कडा भन्दा कडा कार्वाहीको माग गर्दछु ।
कति पापी, कुकर्मी र विश्वासघाती हुँदै आएका छन् पुरुषहरु । जवानी संग खेल्नका लागि अनेकन मिठा सपना देखाउने र प्राप्ती पछि ज्यानै लिने यस्ता घटना प्रति महिलाहरु सचेत हुन जरुरी छ तर कतिपयले जवानीको जोसमा होस नपुराएर यस्ता घटनाहरु दोहरिदै गएका छन् । आगामी दिनमा सजग हुने कि ? विवाह सम्म जवानीको जोसलाई नियन्त्रण गरे यस्ता घटनाको शिकार बनिने छैन होला कि ?
बागलुङमा गाउँपालिका भवन निर्माण गर्न स्थानीयवासीले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध